Rehefa maoske daholo izay jeren’ny mason’ny filoha tiorka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Desambra 2019 17:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, polski, عربي, বাংলা, Español, English
Fa inona marina ary no hitan'i Christophe Colomb ? Loharanon'ny sary: Flickr
Tena tsy misy velively fotoana tsy anaovan'ny filoha tiorka Recep Erdoğan fanambaràna manaitaitra. Tsy ela akory izay, nanamafy izy fa ireo miozolmàna mpanao fivahinianana masina fa tsy i Christophe Colomb, no nahita an'i Amerika, ary dia nanosoka hevitra izy ny hananganana maoske ao Kiobà ho fanomezamboninahitra an'izany zavabita izany.
Tamin'ny 15 Novambra, raha niresaka tamin'ireo miozolmana amerikàna tatsimo tao Istanbul, M. Erdoğan nanambara hoe:
Tao amin'ny Twitter i Oray Eğin, mpamoaka matoandahatsoratra, no nanaporofo hoe taiza ho aiza no mety nifangaro ny zanak'atidohan'i Erdogan :
Mazava loatra fa ireo mpanoratra io fanambaràna io dia ireo mpanoratra matoandahatsoratra sy mpanolotsaina azy fatra-mpifikitra amin'ny nentindrazana ary i Erdoğan izy tenany rahateo. Iray amin'ireny olona ireny i Abdurrahman Dilipak. Tamin'ny 1984, izy no nanao ilay asa soratra nitondra ny lohateny hoe Coğrafi Keşiflerin İçyüzü: Ny tena marina momba ireo fahitàna tany vaovao, izay nalaza nandritra ny fotoana iray tany anatin'ireo faribolana miozolmàna sasantsasany.
M. Dilipak nanohy momba ilay zavatra hitan'i M. Erdoğan ao anatin'ity bitsika tamin'ny 17 Novambra ity :
Bobiler, tranonkala tiorka fanaovana sary mahatsikaiky, no avy hatrany dia naka ilay nofinofin'i Erdoğan hanorina maoske ao Kiobà, tamin'ny fanovàna ny filoha tiorka ho i Che Guevara nitsangana tamin'ny maty:
Iray hafa mpamorona sary mahatsikaiky, İnciCaps, naminany ny ho fihetsik'i La Havane :